(Hadhwanaagnews) Wednesday, May 16, 2018 19:37:15
Sheekada la xadhiidha la kulankiisa uu la kulmay boqorka Kisraa, waxay ahayd Sannadkii lixaad ee hijriyada, ka dib markii uu goaansaday Rasuulka
Saxaabi kasta, taariikh nololeedkiisu wax uun buu caan ku ahaa. Tuusaale ahaan, waxaynu wada ognahay inSaciid Binu Caamir (Rc) uu caan ku ahaa suhdiga iyo in la naco dhaldhalaalka adduunyada. Haddaba, Cabullahi Binu Xudaafi wuxuu isagu caan ku ahaa geesinnimo iyo in aan loo jixin-jixin cadowga Alle. Diinta Islaamka, waxay u suurto gelisay Cabdullahi in uu la kulmo labadii boqor ee jiray wakhtigaas ee kala ahaa Kisraa iyo Qaysar oo kala xukumi jiray Faaris iyo Ruum. Nasiib wanaag, Cabdullahi Binu Xudaafa wuxuu nasiib u yeeshay inuu la kulmo labadaas boqor.
Sheekada la xadhiidha la kulankiisa uu la kulmay boqorka Kisraa, waxay ahayd Sannadkii lixaad ee
hijriyada, ka dib markii uu go’aansaday Rasuulka (S.C.W) inuu u diro qaar ka mid ah asxaabta boqorada cajamta (aan carabta ahayn), si ay ugu yeedhaan Diinta Islaamka. Rasuulka wuu dareensanaa dhibaatada ay wadato howshani, sababta oo ah Saxaabada loo dirayo magaalooyinkaas waa dad aan aqoon luqadaha ay ku hadlaan dadyowgaas, waa magaalooyin fog-fog, taasoo ayan weligood arag. Saxaabadu waxay dadkaa iyo boqorradadoodaba ugu yeedhayaan inay ka tagaan diimaha ay heystaan, isla markaasna ay qaataan diinta Islaamka. Waa safar wata khatar! waa safar kii safra aan soo noqon, kii soo noqdana uu yahay mid nasiib badan. Sidaa darteed, Rasuulka (S.C.W) wuxuu kulmiyay saxaabada, isagoo u jeediyay khudbad. Illaahay ayuu ku mahadiyay, dabadeedna wuxuu Saxaabada ku yidhi "Waxaan doonayaa inaan qaarkiin u diro boqorrada cajamta ( aan carabta ahayn) ah, sidaas darteed ha i khilaafina, sidii ay reer Binu Israa’iil ay u khilaafeen Nebigoodii Ciise (C.S).".
Asxaabtii ayaa yidhi "Rasuulkii Alloow meeshaad doonto noo dir waan fulinaynaa’e" Haddaba, Rasuulka (S.C.W) wuxuu magacaabay 6 saxaabi oo ka mid ah asxaabta si ay diinta Islaamka u gaadhsiiyaan boqorrada Cajamta ah iyo kuwa carbeedba.
Lixdii qof ee la magacaabay waxaa ku jiray Cabdullahi Binu Xudaafa, waxaana loo doortay inuu gaadhsiiyo dhambaalka Rasuulka boqorka Kisraa. Cabdullahi wuxuu u diyaar garoobay safarkiisii, isagoo sagootiyay xaaskiisa iyo caruurtiisa, ka dibna wuxuu u kicitimay safarkii. Waxa uu dhaqaaqay keligii, wuu sii socday ilaa uu ka gaadhay magaalooyinka reer Faaris. Markii uu yimi magaaladii uu degganaa boqorka Kisraa, wuxuu weydiistay boqorka in uu u ogolaado soo galitaanka Magaalada, isagoo weliba u sheegay ciidanka Kisraa in uu sido dhambaal ama waraaq ku socota Kisra. Boqorka Kisra wuxuu u fasaxay inuu u soo geli karo Cabdullaahi. Sidii ayuu ku soo galay Cabdullahi Binu Xudaafa oo ay weliba ka muuqato sharafta iyo cisada Islaamka. Kisraa ayaa wuxuu u baaqay ama u ishaaray nin ka mid ah ciidamadiisa inuu ka soo qaado waraaqda uu sido. Hase ahaatee wuu diiday Cabdullahi inuu dhiibo waraaqda, wuxuuna yidhi "Rasuulkii Alle ayaa wuxuu i faray inaan gacanta kaa saaro waraaqda, mana laga yaabo inaan khilaafo amarka Rasuulka (S.C.W)".
Intaa ka dibna boqorka Kisraa ayaa wuxuu ku yidhi ninkii faraha ka qaad ha ii soo dhowaado’e, ka dibna wuxuu Cabdullahi u dhiibay Kisraa waraaqdii uu uga siday Rasuulka (S.C.W). Waxaa loo yeedhay tarjumaan Carab ah oo ah reer Baqdaad (magaalo ku taalla Ciraaq).
Waraaqdii ayaa la furay, deedna waa la akhriyay waxaanu ahaa sidan: "Magaca Alle ka dib, warqaddan waxay ka socotaa Muxammad oo ah Rasuulkii Alle, waxayna ku socotaa Kisraa oo ah boqorkii Faaris, Nabad gelyo korkooda Alle ha yeelo ciddii raacda hanuunka". Markii uu intaa maqlay Kisraa aad ayuu u cadhooday, waraaqdiinna wuu ka dafay oo isla markiiba wuu jeejeexay, isagoo aan ogaan waxa kalee waraaqda ku xidhan dhameystirkeeda, isla markaana uu qalylinayo isagoo leh "Ma sidatan ayuu waraaqda iigu soo qorayaa isagoo ah addoonkayga!!!!"
Binu xudaafa wuxuu ka dhaqaaqay fadhigii uu Kisra fadhiyay, isagoo aan garanayn waxa lagu samayn doono. In la dili doono iyo in faraha laga qaadi doono. Hase ahaatee, wuxuu Cabdullaahi naftiisa ku yidhi "Waxba igama gelin marba haddiiba aan gutay amaanadii iyo dhambaalkii Rasuulka (S.C.W) ee uu iigu soo dhiibay. Boqorkii Kisra, markii ay cadhadu ka ba’aday ayaa wuxuu ciidamadiisa amar ku siiyay in la soo qabto Cabdullaahi Binu Xudaafa. Nasiib wanaag, may soo helin oo waxay ogaadeen inuu gaadhay Jasiiradda Carabta. Cabdullaahi Binu Xudaafa, wuxuu yimi magaaladii Madiina, isagoo la kulmay Rasuulka (scw), wuxuuna Rasuulka (scw) uga waramay wixii uu kala kulmay boqorkii Kisra iyo inuu jeejeexay waraaqdii uu uga siday Rasuulka (scw).
Nabi Muxammed (N.N.K.H) aad ayuu uga cadhooday arrinkaa, wuxuuna Illaah ka baryay inuu cidhibtiro boqortooyada Kisra. Habaarkii Rasuulka (scw) waa la aqbalay, oo wuxuu Illaahay ku salliday (sababay) Kisraa wiilkiisa "Shiiraweeh", halkaas oo uu ku dilay. Taasi waxay ahayd sheekadii dhexmartay Cabdullaahi Binu Xudaafa iyo boqorka Kisraa.